Ndị Kọlọsi 4 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Moore Mozambican Sign Language Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Kọlọsi 4:1-18
Ọdụ Pọl dụrụ ndị nna ukwu (1)
“Na-ekpenụ ekpere mgbe niile” (2-4)
Na-egosinụ na unu ma ihe ma unu na ndị na-abụghị ụmụnna nọrọ (5, 6)
Ekele ikpeazụ (7-18)
4 Ndị nna ukwu, na-emesonụ ndị ohu unu otú ziri ezi na otú dị mma, ebe unu ma na unu nwekwara Nna Ukwu n’eluigwe.+ 2 Na-ekpenụ ekpere mgbe niile.+ Unu echefukwala ịna-ekpe ya. Na-ekelekwanụ Chineke.+ 3 Na-ekpekwanụ ekpere maka anyị+ ka Chineke megheere anyị ụzọ ka anyị na-ekwusa okwu ya na ihe nzuzo dị nsọ gbasara Kraịst, nke mere e ji tụọ m mkpọrọ.+ 4 Na-ekpekwanụ ekpere ka m na-ekwusa ya otú ndị mmadụ ga na-aghọta ya, dị ka m kwesịrị isi na-ekwusa ya. 5 Mgbe unu na ndị na-abụghị ụmụnna nọ, na-akpanụ àgwà otú na-egosi na unu ma ihe. Na-ejinụ oge unu eme ihe kacha mkpa.*+ 6 Ka okwu unu na-atọ ụtọ mgbe niile ka ihe e tinyere nnu.+ Ọ ga-eme ka unu mara otú unu ga-esi azaghachi onye ọ bụla.+ 7 Tikikọs+ ga-agwa unu ihe niile gbasara m. Ọ bụ nwanna m m hụrụ n’anya na onye ozi a tụkwasịrị obi na ohu ibe m n’ihe gbasara Onyenwe anyị. 8 M na-ezitere ya unu ka ọ gwa unu otú anyị mere, kasiekwa unu obi. 9 M na-ezite ya na Onesịmọs+ nwanna m, onye a tụkwasịrị obi, onye m hụrụ n’anya, onye obodo unu. Ha ga-agwa unu ihe niile na-eme ebe a. 10 Arịstakọs,+ onye mkpọrọ ibe m, na-ekele unu. Mak,+ nwa nwanne Banabas, na-ekelekwa unu. (Mak a bụ onye m gwara unu ka unu nabata+ ma ọ bịa ịhụ unu.) 11 Jizọs, onye a na-akpọ Jọstọs, na-ekelekwa unu. Ndị a niile bụ ndị Juu.* Naanị ndị a bụ ndị ọrụ ibe m maka Alaeze Chineke. Ha na-akasikwa m nnọọ obi.* 12 Epafras,+ onye unu na ya nọbu, ohu Kraịst Jizọs, na-ekele unu. Ọ na-ekpesi ekpere ike mgbe niile maka unu, ka unu wee kwụrụ chịm n’ikpeazụ ka ndị tozuru etozu, na-ekwenyesikwa ike n’ihe niile gbasara uche Chineke. 13 M na-agba akaebe na ọ na-agba ezigbo mbọ maka unu nakwa maka ndị nọ na Leodisia na ndị nọ na Haịrapọlis. 14 Luk,+ onye anyị hụrụ n’anya, onye na-agwọ ọrịa, na-ekele unu. Dimas+ na-ekelekwa unu. 15 Keleerenụ m ụmụnna ndị nọ na Leodisia. Keleekwaranụ m Nimfa na ọgbakọ na-ezukọ n’ụlọ ya.+ 16 Unu gụchaa akwụkwọ ozi a, zigaranụ ya ọgbakọ ndị Leodisia ka ha gụọ.+ Gwakwanụ ha ka ha zitere unu nke m zigaara ha ka ununwa gụọ. 17 Gwakwanụ Akịpọs,+ sị: “Na-agba mbọ ka ị rụchaa ọrụ Onyenwe anyị gwara gị rụọ.” 18 Mụnwa bụ́ Pọl na-ekele unu. Ọ bụ m ji aka m na-ede+ ekele a. Burunụ mkpọrọ a tụrụ m+ n’uche. Ka Chineke meere unu amara.
^ Na Grik, “Na-azụtaranụ onwe unu oge.”
^ Na Grik, “ndị e biri úgwù.”
^ Ma ọ bụ “Ha na-agba m nnọọ ume.”
Ndị Kọlọsi 4